ဆရာတော် ဦးကုမာရာဘိဝံသ၏ ထေရုပ္ပတ္တိ – ဝင်းမေတ္တာ
ဆရာတော် ဦးကုမာရာဘိဝံသ၏ ထေရုပ္ပတ္တိ
1975 -မြန်မာနိုင်ငံ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ ကိုင်းဝန်းကျေးရွာတွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
1988 -စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကောလင်းမြို့နယ်၊ကိုင်းဝန်းကျေးရွာ ဆရာတော်ဦးဥတ္တရထံတွင် ရှင်သာမဏေပြုသည်။
1995 -၁၉၉၅ ခုနှစ်၊မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊နန္ဒဝန်လမ်းရှိ၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ(ပါဠိတက္ကသိုလ်)ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်၊ခဏ္ဍသိမ်တော်မြတ်၌၊ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တကောဏ္ဍညကို ဥပဇ္ဈာယ်ပြု၍၊ တိပိဋကဓရ(ယော)ဆရာတော်စသော သံဃာတော်များ၏၊ချီးမြှောက်မှုဖြင့် ရဟန်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသည်။
1994-1998-မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊နန္ဒဝန်လမ်းရှိ၊မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ(ပါဠိတက္ကသိုလ်)ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်၌၊အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေများကို လေ့လာခဲ့သည်။
1999- မြန်မာနိုင်ငံ၊ရန်ကုန်မြို့၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊နန္ဒဝန်လမ်းရှိ၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံ(ပါဠိတက္ကသိုလ်)ရွှေကျင်ကျောင်းတိုက်၌၊စာပေများ ပို့ချပေးခဲ့သည်။
2000-2004-မန္တလေးမြို့၊စိန်ပန်းရပ်၊မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၌၊အဘိဝံသစာမေးပွဲများအတွက်၊အဆင့်မြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေများကိုဆက်လက် လေ့လာ၍၊ စာပေများသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည်။
2004-2005-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်မြို့၊ဖားအောက်တောရရိပ်သာ(ပင်မ) ၌ ဖားအောက်တောရဆရာတော်ကြီးထံတွင် တရားအားထုတ်ခဲ့သည်။
2005-2010-မန္တလေးမြို့၊စိန်ပန်းရပ်၊မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၌၊အဘိဝံသစာမေးပွဲများ ဆက်ဖြေရင်း စာပေများပို့ချပေးခဲ့သည်။ မန္တလေးမြို့၊ပရိယတ္တိသာသနဟိတ(သကျသီဟ)ဓမ္မာစရိယစာမေးပွဲ၌ (၂) ကျမ်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။
အခါအားလျော်စွာ တောရကျောင်းများစွာသို့ သွား၍ စာကြည့်, တရားအားထုတ်ခဲ့သည်။
2010-2011-မွန်ပြည်နယ်၊မော်လမြိုင်မြို့၊ဖားအောက်တောရရိပ်သာ(ပင်မ) ၌ ဆက်လက်တရားအားထုတ်ခဲ့သည်။
2013-2014-မန္တလေးတိုင်း၊ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ဖားအောက်တောရရိပ်သာ၌ ဖားအောက်တောရဆရာတော်​၏(၄)လတရားစခန်းဝယ် တရားအားထုတ်ခဲ့ပြီး၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၌ စာပေလေ့လာ,တရားဟော, တရားပြ, တရားအားထုတ်ရင်း(၂) ဝါ သီတင်းသုံးခဲ့သည်။
2013- 2020 အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊သီရိလင်္ကာ၊လာအို၊တောင်ကိုရီးယား၊အိန္ဒိယ၊တရုတ်၊ထိုင်ဝမ်၊အမေရိကန်၊၊ကနေဒါ စသောနိုင်ငံများသို့ အခါအားလျော်စွာ သွားရောက်၍၊ ရက်တိုတရားစခန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်၊ တရားဟော, တရားပြပေးခြင်းများ ပြုလုပ်လျက် သာသနာပြုခဲ့ပါသည်။
2015-2021-မန္တလေးတိုင်း၊ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ဖားအောက်တောရရိပ်သာ၌ ဖားအောက်တောရဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူ တရားဟော, တရားပြ, တရားအားထုတ်၍၊ သာသနာ့အလုပ်ကို ပြုလုပ်ရင်း သီတင်းသုံးနေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။
ဆရာတော် ကုမာရာဘိဝံသ သင်ကြားပို့ ချသည့် Zoom Online ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးသို့ သင်တန်း။
Sayadaw U Kumarabhivamsa
1975 : Born in Kaing Won Village, Kaw Lin Township, Sagaing Division, Myanmar.
1988 : Ordained asanovice in Kaw Lin Township, Sagaing Division, Myanmar.
1995 : Received Higher Ordination on 15 March 1995 in Bahan Township, Yangon, Myanmar.
1988-1993 : Studied Primary Buddhist Scriptures in Kaw Lin Township, Sagaing Division, Myanmar.
1994-1998 : Studied Advanced Buddhist Scriptures at Mahāvisuddhāyon Education Centre, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
1998 : Obtained the government authorized Dhammācariya degree.
1999 : Becameateacher at Mahāvisuddhāyon Education Centre, Bahan Township, Yangon, Myanmar.
2000-2004 : Continued to study Advanced Buddhist Scriptures and taught senior monks at the new Masoeyein Education Centre, Mandalay, Myanmar. Obtained the Abhivaṃsa degree in Yangon in 2003.
2004-2005 : Practiced meditation at Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Main), Mon State, Myanmar.
2005-2010 : Taught senior monks at the new Masoeyein Education Centre, Mandalay, Myanmar. Went to many forest monasteries for self-practice from time to time.
2010-2011 : Continued meditation practice at Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Main), Mon State, Myanmar.
2012 : Spent the rains retreat and continued to practice meditation at Batam, Indonesia and visited Singapore for Dhamma sharing.
2013 : Attended the Meditation Teacher Course retreat conducted by the Ven Pa-Auk Sayadaw at Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Pyin Oo Lwin), Mandalay, Myanmar.
2013-2014 : Practiced, taught the Buddha’s Teachings and spent the rains retreat in Taiwan.
2015-2017 : Practiced, taught the Buddha’s Teachings and spent the rains retreat at Pa-Auk Meditation Centre (Pwin Oo Lwin), Mandalay, Myanmar. Currently is the Meditation Teacher (Kammaṭṭhānācariya) at Pa-Auk Meditation Centre (Pwin Oo Lwin).
2013-2017 : From time to time went to Indonesia, Singapore, Malayisa, Thailand, Vietnam, Cambodia, India, China and Sri Lanka to conduct short meditation retreats and Dhamma sharing.